LA OGAADAY: Qaabka Ay Noqon Doonto Shaxda Manchester United Marka Uu Zidane Yimaaddo, Afar Ciyaartoy Oo Uu Kasoo Kaxaysan Doono Real & Atletico Madrid Iyo Karim Benzema Oo Kaydka U Fadhiisan Doona Lukaku – GOOL24.NET
Hadal-haynta ugu weyn ee gudaha kooxda Manchester United ayaa ah muddada uu sii joogi doono tababaraha cadaadiska badan saaran yahay ee Jose Mourinho oo ay khubrada ciyaaruhu saadaalinayaan in cimrigiisu soo gaaban doono.
Manchester United ayaa isla marka uu Mourinho ka tago, waxa beddeli doona sida wararka suuqu sheegayaan macallinkii hore ee Real Madrid ee Zinadine Zidane, kaas oo shaqo la’aan ahaa tan iyo bishii May markii uu iska casilay Real Madrid oo uu la qaaday saddex Champions League oo xidhiidh ah.
Tababare Zidane ayaa marka loogu dhowaaqo inuu yahay macallinka Manchester United, waxa uu samayn doonaa afar saxeex oo waaweyn oo uu ku beddelayo qaab-ciyaareedka Red Devils, ciyaartooyadaasna waxa uu kasoo qaadan doonaa labada naadi ee ka dhisan magaalada Madrid ee Real iyo Atletico.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa Spain, ciyaartoyga ugu horreeya ee uu u dhaqaaqi doono heshiiskiisa tababare Zidane ayaa noqon doona xiddiga Atletico Madrid ee Griezmann, kaas oo Manchester United ay ku guul-darraysatay inay soo xero-geliso xagaagii hore.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray in saxeexa Griezmann kaddib uu Zidane weerar ku qaadi doono kooxdiisii hore ee Real Madrid oo uu kasoo qaadan doono Toni Kroos, Raphael Varane iyo Karim Benzema.
Saddexda laacib ee Griezmann, Varane iyo Toni Kroos ayaa uu qorshuhu yahay inuu boos joogto ah ka siiyo kooxda koowaad, laakiin Karim Benzema ayaa beddel suge wanaagsan u noqon doona Lukaku.
Toni Kroos ayaa xallin doona dhibaatada khadka dhexe, waxaanu dibedda usoo saari doonaa tayada Paul Pogba oo wakhtigan ku dhow inuu Manchester United uga tago Jose Mourinho dartii, hase yeeshee Varane ayaa isaguna udub-dhexaad u noqon doona difaaca aan sida fiican iskula haysanin ee ay goolashu sahalka kaga dhashaan, waxaana lagu mataanayn doonaa Baily, halka dhinacyadana ay ka ciyaari doonaan Luka Shaw iyo Valencia.
Khadka dhexe, waxa Toni Kroos ay iska garab ciyaari doonaan Matic oo dhex-da dambe ahaan doona iyo Paul Pogba, halka weerarkuna noqon doonaan saddexda laacib ee Griezmann, Sanchez iyo Lukaku. Goolka ayaa waxa baaqi kusii ahaan doona De Gea oo aanu marnaba Zinedine Zidane taaban doonin.
Shaxda Mala-awaalka ah ee laga sii sameeyey Manchester United